Tallaabo laga qaaday rag doonayay iney gubaan Kitaabka Quraanka Kariimka | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Tallaabo laga qaaday rag doonayay iney gubaan Kitaabka Quraanka Kariimka
Tallaabo laga qaaday rag doonayay iney gubaan Kitaabka Quraanka Kariimka
Dowlada Belgium-ka ayaa wadankeeda ka ceyrisay isla markaana muddo sanad ah ka mamnuucday wadankeeda shan qofood oo la sheegay iney wadeen qorshe ay ku gubaan kitaabka Qur’aanka Kariimka.
Shantaan qofood oo la sheegay iney u dhasheen wadanka Denmark ayaa qorsheynayay iney deegaan ay Muslimiinta ku badan yahiin falkaan foosha xun ku sameeyaan, balse waa laga hortagay.
Xoghayaha arrimaha gudaha dalka Belgium Sammy Mahdi wuxuu damacaan ku tilmaamay mid ka hor imaanaya kala dambeynta iyo nidaamka ka jira wadanka Belgium-ka, waxaa xusid mudan iney taageero buuxa u yahiin siyaasiga xagjirka ah ee Rasmus Paludan kaas oo ka tirsan xisbiga Midig fog ee wadanka Denmark.
Siyaasigaan waxaa dhawaan laga soo ceyriyay dalka Faransiiska todobaadkaan gudahiisa kadib markii uu qudhiisa damcay inuu bartamaha magaalada Paris ku gubo kitaabka Qur’aanka Kariimka.
Siyaasigaan islaam naceybka ku caan baxay wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Stram Kurs, dhawaan ayaana lagu xiray dalka Denmark kadib markii uu muuqaalo aflagaado u ah Islaamka soo dhigay baraha bulshada.
Warbaahinta maxaliga ah ee dalka Belgium-ka waxey qireen in xukuumadda ay ka hortagay qorshaha shan qof oo la tuhunsanaa iney deegaanka Molenbeek-Saint-Jean ee ka tirsan magaalada Brussels falkaan ka geystaan.
Xoghayaha arrimaha gudaha dalka Belgium Sammy Mahdi waa shaqsi ku dhashay Belgium balse ay dhaleen qoys Ciraaq ah wuxuuna aad usoo dhaweeyay xarigga raggan iyo in dalka laga ceyriyo.